Manaparitaka ny fambolena natoraly ny AGRINATURE. - Madagascar Informations
Manaparitaka ny fambolena natoraly ny AGRINATURE.
14 novembre 2016 14 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Fikambanana manapariaka ny fambolena natoraly ny Agrinature , reny mamelona ny tany ka mila kolokoloina sy arovana. Efa hatraminy taona 2012 no efa nisy ny fikambanana ka tanjona ny hamporisika ny tantsaha hampiasa ny teknikam-pambolena miainga amin’ny fitiavana sy fanajana tontolo iainana mba hamerenana ny heriny tany aminy endriny ara-boajanahary.
Tsapan’ity fikambanana ity fa manomboka misy fiatraikany betsaka aminy fahasalamana ny sakafo hohanina ka antony nironany any amin’ny fambolena natoraly. Maro tsy voafetra ny tombotsoa omeny fambolena zanatany satria miverina amin’ny heriny ara-boajanahary ny tany hanome vokatra tsara lavitra noho ny mahazatra ary tsy fampiasa zezika biolojika fa natoraly avokoa.
Tsy misy ny tany reraka raha mampiasa ny fambolena natoraly satria tsy mety lany ny tsiro ny tany ka antony hamporisihiny ny tantsaha hampiasa azy io. Azo tsapain-tanana ny vokatra ara-natoraly satria tsara tsiro ny vokatra omeny ,mateza sy maharitra azo tehirizina, tsara vidy ary mampihena ny fandaniana.
← La pépinière d’Antsirabe vahaolana ho an’ny tontolo iainana.
Réception des travaux de réhabilitation du Secteur 10 de la plaine d’Antanimasaka à Marovoay →
Pepiniere d’Antsirabe – Fier Mada 19
3 août 2017 Madagascar Informations 0
Madagascar Biodiversity Fund :Contribue au développement humain durable par la valorisation et la conservation de la Biodiversité
13 juillet 2018 Madagascar Informations 0
La Pepiniere d’Ambatolahy – Fier Mada 19